ezaposwa ngomhla 08 / 29 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ubugqirha beDrams. Ibe 59 Comments.
I-Sildenafil citrate 171599-83-0 isilwanyana esisetyenziselwa ukuphathwa kakubi kwe-erectile kunye ne-pulmonary blood pressure (PPH). I-Sildenafil inokuthi ikhethize umsebenzi we-PDE5 kubantu. I-PDE5 ichazwa kakhulu kwi-sponge yesiponsi kwaye iphantsi kwezinye iisculi kunye namalungu. Emva kokuthatha i-sildenafil, i-corpus cavernosum vasomotor muscle ihlaziya phantsi kwesenzo sonyango, ukunyuka kwegazi kunyuka, umzimba we-cavernous ukhululekile, kwaye ipenisi yakha, ngaleyo ndlela ivelise impembelelo yokwelapha kwi-penile erectile dysfunction.
I-Flibanserin i-147359-76-0 yipilisi eyenziwa ngokusesikweni ekwenzeni unyango, kodwa ifunyanwe ingasebenzi kulo mbandela kwaye ibuye yavunywa kwakhona ukunyanga kokungasebenzi kakubi ngokwesini (HSDD) kubafazi - nangona kunjalo akuqinisekisiwe apha kukhokelela kwiingxabano ezininzi malunga nesihloko se-flibanserin (i-Addyi) kunye nesiphumo saso.
Ukuba ujamelana nengxaki yokulungiswa, isilwanyana sesini sinokukunceda ukulwa. Ukongeza kokulwa nale ngxaki, uya kufumana ukuzalana ngokwesini kwaye uyanelisa umlingane wakho ngaphandle kokwesaba "ukuphazamiseka" ngexesha lomsebenzi; ukuvakalelwa kunye neentloni ngexesha.
Ngethuba lobomi, kunokubakho amaxesha apho indoda okanye ibhinqa ayifuni ukulala ngesondo kunye neqabane layo. Le ngxaki ininzi yengqondo kwaye inokuba ngenxa yeemeko ezahlukeneyo: ukukhathala, iingxaki zomntu, uxinzelelo ... Ezi zinto zingabangela ukulahla kwi-libido kunye nokuzonwabisa.
I-59 Impendulo Amazwana
admin, admin09 / 29 / 2018 kwi-6: 06
Njengoko i-PDE5 inhibitor, nceda ukukhuthaza ukuhamba kwegazi, ukubetha kwentliziyo ngokukhawuleza kukubonakaliswa kweziphumo ebezingalindelekanga.
admin, admin09 / 29 / 2018 kwi-5: 17
Kwinqaku leleyo, iya kubelana ngeenkcukacha zesebenzisa izidakamizwa zesondo. zibandakanya ukusebenzisana kwezidakamizwa zikaTadalafil, ukusebenzisana kwezidakamizwa ze-flibanserin ... njl.
admin, admin09 / 29 / 2018 kwi-5: 09
Kwinqaku leleyo, iya kubelana ngolwazi oluninzi lwezonyango zesini. Faka i-dosage, imiphumo emibi, ukusebenzisa ... njl.
admin, admin09 / 29 / 2018 kwi-4: 40
Kulo lonke ulwabelana ngolwabelana ngeziyobisi, uya kufumana ulwazi oluninzi. Imiphumo emibi ye-tadalafil okanye i-Flibanserin emibi, kunye nolwazi lwe-dosage ... njl.
admin, admin09 / 29 / 2018 kwi-4: 29
Akuthethi i-Viagra kwifom yefowder, into esebenzayo yeViagra yi-sildenafil citrate powder
Cheska Summers09 / 25 / 2018 kwi-9: 24
Ndiyicelile umyeni wam ukuba sinokuzama ukuzisebenzisa izilwanyana zesini ngexesha elilodwa. Ngesinye isikhathi, ndiqaphele ukuba kukho ngokwenene ukungafani kwindlela esiyisebenzisayo ngayo. I-Placebo mhlawumbi, okanye nje ingumphumo walo. Kodwa kunjalo, ayikho inxaxheba yezenzo zethu zentsebenzo zesini. Kanye xa sifuna into eyahlukileyo.
Ryan Daniel09 / 25 / 2018 kwi-9: 21
Ngokomntu, andizange ndizame nasiphi na isondo, kodwa ndigcina le nqaku ngeenjongo ezizayo. Ukuba kunokwenza amava obulili obukhulu, ngoko andiyikuboni isizathu sokuba ndingayisebenzisi. Sekunjalo, ndicinga ukuba ezi zi yobisi kufuneka zisetyenziswe ngokumodareyitha ukwenzela ukuba ungaxhomeki kulo.
Albeneth09 / 23 / 2018 kwi-10: 49 ntambama
Ngaba ezi zi yobisi zikhuselekile? Ndiyathemba ukuba ayinakubangela ukuxhomekeka. Ngaphezu kwakho konke, ukudibana nogqirha oyingcali kubaluleke kakhulu.
Doug Brians09 / 23 / 2018 kwi-5: 33 ntambama
Kulungile ezi zi yobisi zifumaneka kubayeni nabasetyhini. Zivakala njengezongezelelo eziphilileyo oogqirha abanokumisela kwaye bazinikezele.
Hank Nolan09 / 23 / 2018 kwi-5: 31 ntambama
Kuhle ukuba ezi ziyobisi zikhona ukuze abantu babe nobomi bobulili obusempilweni. Kulungile zonke iziphumo kunye nokuqapha kuluhlu.
Lionel09 / 23 / 2018 kwi-1: 47 ntambama
i-dapoxetine iya kunceda ukunciphisa ubudlelwane obunxulumene nabanye abantu banokuba nezilumko ukuzama ukuba iqabane elijongene neengxaki zesini zesini.
Emma09 / 23 / 2018 kwi-1: 42 ntambama
Izidakamizwa ngenxa yesondo esikhulu njengalezi azisebenzi zodwa, kufuneka ukuba kube ngumzamo ngumsebenzisi kwaye kuchazwe ngokucacileyo apha ukuba idinga ukuvuselelwa komsebenzisi.
benzisa09 / 23 / 2018 kwi-12: 32
Ndiyazi ukuba ezi zidakamizwa ezinobungozi bokusetyenziswa kwesondo, kodwa kuya kuba kuhle ukuxelela abafundi ezinye iziphumo ezinobungozi kunye nokuqapha.
Diana09 / 23 / 2018 kwi-12: 24
Ininzi yemingano yomtshato iphuma kumadoda athela umdaka kunye nokusabalalisa kwangaphambili. Kukulungele ukuba silale ngesondo ukuphucula izidakamizwa ezinjengale ukujongana nale ngxaki.
Pietro Tee09 / 22 / 2018 kwi-9: 23 ntambama
Ngaba utsho ukuba isistim sokunyusa isondo, i-viagra, ngoku ifom yefowder? Uvuyo! Ngoku ufumana i-teagra yakho yeeyi. Kodwa, kubamba kukuba, ayiyi kuphucula ukusebenza kwakho, vele ubeke ibhasiki yakho ukuba ihambe hahahahaha ezithambileyo.
Sexy Mack09 / 22 / 2018 kwi-9: 19 ntambama
Ngaba oku kunjalo? Ngaba oku kuza kundifumana i-15 ngeenxa zesondo? Okokuziphatha kakubi ngokwesondo kufuneka kukhishwe izidakamizwa.hahahah
Rhona Burchill09 / 22 / 2018 kwi-9: 05 ntambama
Andiqinisekanga ngokuqinisekileyo ukuba kutheni ndilapha kodwa, ngokuqinisekileyo ndiqinisekile ngento malunga neengxaki ze-erectile. Ndiya kuthetha emva kokuba nditshatile iminyaka emininzi umyeni wam ngoku ethatha ii-supplements zokuphucula idrive yakhe. Ukuba ibiseyimihla yakudala ebengavuya kodwa ngoku upholile ngayo.
Victor09 / 22 / 2018 kwi-8: 32 ntambama
Andiyena ovulelekileyo kwiidakamizwa zesondo ubuncinane xa kuziwa kwiingcamango. Izinto eziphathekayo ezifana ne-ginseng yenza inkohliso! Indlela kuphela endisebenzisa ngayo oku xa ndikhula. Ewe ngokwenene ndiyakuqwalasela oku.
Malik Vennity09 / 22 / 2018 kwi-7: 53 ntambama
Iimpembelelo ze-PDE5 zeTadalafil kunye namava amnandi avela kubasetyhini abanjengoFlibanserin bobabini banesizathu esaneleyo sokuba ngaba isini sifumane ukuxhaswa okuncedo. Ndiqinisekile ukuba kuya kuba namaqela amanqwenela kuwo onke amayeza adweliswe e-US nakwamanye amazwe.
Howy Ridell09 / 22 / 2018 kwi-7: 48 ntambama
Iziphumo kunye nezifundo zekliniki zithembe kakhulu. Ubomi obusempilweni obunempilo bubalulekile kwabaninzi kwaye ndivuyayo ukuba ezi ziyobisi ziyamkelwa kakuhle.
Shanna Beltram09 / 22 / 2018 kwi-1: 03 ntambama
Kubalulekile ukuba unolwazi malunga noko ungena phambi kokuba ungene kwisaka okanye kwindawo yokuhlambela nge-baggie epheleleyo yento ethile. Ukukunceda, siye saqhelana nezixhobo ze-drug enthusiast, zidibanisa malunga nokuba ziphi izifundo ezicwangcisiweyo, kwaye zidibanisa nabantu abaninzi-ukusuka kwizinto eziqhelekileyo ukuya kuma-psychonauts, ukusuka kubathandi be-amateur kuogqirha kunye neengqondo-njengokuba sinokuzihlanganisa le ngqungquthela lonke ulwazi olukhoyo apho malunga nokuphakamisa izidakamizwa.
UJanine Marie Alexandra Bocateja09 / 22 / 2018 kwi-1: 00 ntambama
Ezinye izidakamizwa zesini zingakuvula ukuze uzalise i-ecstasy, ngelixa abanye bahlaseli bebhoner. Uthi igama lonyango, kwaye umntu uthi bathanda ukulala ngesondo.
nolly09 / 22 / 2018 kwi-5: 45
Kulungile ukuba ukusetyenziswa kweziyobisi ngokwesondlo kwindoda okanye ibhinqa. Kuya kunceda bobabini ngesondo ukuba bafumane nayiphi na isitho esinikwa ngokwesini kuya kuhambelana naluphi na lwezi zi yobisi
Danny09 / 22 / 2018 kwi-5: 19
Oku kuya kunceda ukuvuselela ubuhlobo obunokuba bubuhlungu ngenxa yeengxaki zesondo. Abathandekayo bafanele babe nemilinganiselo kule nto yokuvuselela.
Vikram Parmar09 / 21 / 2018 kwi-10: 20 ntambama
Ukuxhomekeka kwiidakamizwa zesini kunokubonakalisa ukubulala. Ingenza ukuba umntu angathembeki kangako kwisenzo sezesondo.
Mog Arten09 / 21 / 2018 kwi-7: 03 ntambama
Kuyathakazelisa ukuba ezi zi yobisi zikhuthaza ukusebenza kwezesondo kunye nokuzonwabisa. Enkoso ngokwabelana.
Miles Dubager09 / 21 / 2018 kwi-4: 41 ntambama
Iziphumo ezithandayo. Ndiya kuba nolwazi ukuba ngaba kukho naziphi na iziphumo ezibangelwa ukuthatha ngaphezulu kweTadalafil okanye iFlibanserin kunokuba imiselwe. Enkoso ngokwabelana!
Lisa Nataliany09 / 21 / 2018 kwi-9: 28
Ndivuyiswe kakhulu ukufumana eli nqaku, kwaye ndiya kucela umyeni wam ukuba afunde oku. Wonke umntu ufuna ukulala ngokwesondo, akukho mfuneko yokuba abe neentloni ngalokhu. Ndiyabulela ngokukwabelana ngolwazi malunga nesidlo segciwane lesini kule nqaku, kuyiluncedo!
URichard Hanks09 / 21 / 2018 kwi-7: 59
Mna kunye neqabane lam sifuna iindlela zokwenza ubomi bethu bobulili bube mnandi. Ezi zi yobisi zizwakala ngathi zifanelekile ukuzama. Enkosi!
Vincent Matthews09 / 21 / 2018 kwi-7: 56
Ngoku ndiyazi ukuba zeziphi izidakamizwa ezizisebenzisayo ukuphucula ukusebenza kwezesondo ngexesha elifutshane! Siyabonga, thanda amanqaku akho.
Tom Esthber09 / 21 / 2018 kwi-6: 39
Zange khe ndibenangxaki ne-arousal yam ngaphandle kokundenza Horny rhoqo. Ndicinga ukuba ndingadinga ezi zongezelelo ze-PDE5 kwiminyaka embalwa elapha.
benedicta09 / 21 / 2018 kwi-1: 32
Ndiza kuncoma u-Udenafil kuba nje kufana nokuba abantu basebenzise.Okulungileyo ngolu hlobo luyimiphumo emibi.
babi09 / 21 / 2018 kwi-1: 26
Ukuzonwabisa ngexesha lokwabelana ngesondo kubaluleke kakhulu kubalingane kwaye banokwenza okanye baphathe ubomi babo bobulili. Ndiyathemba ukuba abo abanalolo lonwabo banokusebenzisa le mithi ngokwabo.
uphawu09 / 20 / 2018 kwi-11: 34 ntambama
Ndiyathanda apho ubonise khona ukuba ukuba ingxaki yesini ingasombululwanga kunye neziyobisi zesini, ngoko ugqirha kufuneka uqhagamshelane naye. Ndicinga ukuba kuya kuba yinto efanelekileyo kukuyenza kuloo meko.
INtunu09 / 20 / 2018 kwi-11: 27 ntambama
Ubomi bentlobano yeso sibini sinjengomnxeba ophilayo waluphi na ubudlelwane njengolu hlobo kufuneka luphuculwe ngexesha elide.iyo kulungele ukusebenzisa nanoma yimuphi walaba baphucula ukulungela ubuhlobo.
UFredrick Isinguard09 / 20 / 2018 kwi-11: 21 ntambama
Namhlanje izidakamizwa zesondo zisetyenziswe ngabantu abaselula abaneengxaki. Nangona kunjalo, baye banceda abantu abadala kunye nabaxhamli be-ED ukuba babuyisele into ebalulekileyo yobomi babo.
UCaptain U09 / 20 / 2018 kwi-10: 44 ntambama
Mhlawumbi ixesha lokuthetha ngalezi zinto ngaphandle kwezilwanyana, izilwanyana zesini, ukusetyenziswa kwesondo. Ndithetha ukuba isondo kubaluleke kakhulu kunokuba kunokuba yingxaki. Ngenxa yoko, ndonwabile ukuba le mibandela ikhona. Ubuncinane abantu bayamkela ngokukhawuleza oku.
Mach09 / 20 / 2018 kwi-9: 46 ntambama
Kuphi na kwi-specs specs? Ndiyathetha ngenyameko? Ziziphi izixhobo kunye nezinto? Ndiyathetha into endiyithandayo, Ukwazi oko kuvela kubalo.
Bradley Lavender09 / 20 / 2018 kwi-4: 17 ntambama
Ivakala njengezilwanyana ezivivinywayo nezikhuselekileyo zokusetyenziswa kwezesondo. Ndingazi ukuba zeziphi izidakamizwa okanye izongezelelo ezingayithathi ngexesha lokusebenzisa iTadalafil okanye iFlibanserin. Enkoso ngokwabelana.
I-Curt Rancher09 / 20 / 2018 kwi-4: 14 ntambama
I-Horray ye-libido ephambili! I-Dyclonin kunye ne-flibanserin zivakala njengezithako ezinamandla zokwenza umsebenzi wesondo olungcono. Enkoso ngokwabelana.
AJ09 / 20 / 2018 kwi-1: 21 ntambama
Ulwazi lunamandla, nokuba yintoni na inokuthatha. Ubuncinane kufuneka ndifune naluphi na uhlobo olukhuthazayo ukwenzela ukuba isipilili sithandeke ngakumbi, ngoku ndiyazi ukuba kuthathe ntoni.
UDavid Tjoe09 / 20 / 2018 kwi-9: 17
Le yona nqaku inomdla kakhulu ukufunda ... :). Ndakhe ndazama ukusebenzisa le nto - ngaphandle kwinqwenela. Ngokuqinisekileyo, andiyivuyo ngokwenene ... Ndiyayiva intliziyo yam ikhupha ngokukhawuleza kwaye ingonwayi entloko yam.
Harold Adams09 / 20 / 2018 kwi-5: 40
UAvanafil wandinceda ngokwenene. Ndiphantse ndixinezeleke xa ndijongene neengxaki zam zesondo, kwaye ndiyabulela ukuba ndibekwe ngu-avanafil.
Joel Warner09 / 20 / 2018 kwi-5: 38
Ndasebenzisa i-sildenafil citrate xa ndineengxaki. Kwathatha ixesha, kodwa kwakunempumelelo.
admin, admin09 / 20 / 2018 kwi-4: 17
Mhlobo onguhlobo, isithako esiyinhloko seViagra nguSildenafil citrate, CAS 171599-83-0, unokufumana iinkcukacha ezingezantsi kwe-tadalafil I-CAS 171596-29-5.
Mozd09 / 20 / 2018 kwi-4: 08
Ndiqinisekile ukuba amadoda angama-ejaculation angakabi nako ukuzama ukuzama uVardenfil njengesiza esingaba lula ukuphucula umonakalo we-penile erectile kwaye uncede umgangatho kunye nobude besini.
Bolly09 / 20 / 2018 kwi-4: 01
Ndiyathemba ukuba abesilisa abanesidima se-erectile bafika bafunde iSildenafil citrate ukwenzela ukuba babathenge ukuze babancede babuye erection yabo. Kubaluleke kakhulu kubomi besondo obuhle.
joey09 / 19 / 2018 kwi-10: 09 ntambama
Andazi ukuba kutheni ndifunda oku. haha. Kodwa ulwazi olukhulu ngalo mbandela. Qiniseka nje ukuba ubuze ingcali ngaphambi kokuba uthathe naziphi na iziyobisi zesini.
Kurt09 / 19 / 2018 kwi-9: 14 ntambama
Ndicebisa ukuba ndidibane nogqirha wakho kuqala ngaphambi kokuba uthathe elinye lala mayeza ezesondo. Ndiyathetha ukuba ndihlala ndifunda iimeko apho umntu efa ngenxa yale nto. Ukuphuma nge-bang ngokoqobo.
Jiffy Rando09 / 19 / 2018 kwi-8: 59 ntambama
Ngenhlanhla Andiyifuni IT. YET kwaye sinethemba lokuba akusayi kuba. Nangona kunjalo, ndiyamangaliswa yiViagra engekho apha.
beziintsana09 / 19 / 2018 kwi-7: 05 ntambama
I-8 izidakamizwa eziphathekayo zobulili, oko kunika omnye umvo wokukhetha kwaye usebenze ngokuchanekileyo kunye nokukhetha. Ukufuna umdla wesondo ngesondo kubaluleke kakhulu kwaye le powder iya kunceda.
teddy09 / 19 / 2018 kwi-6: 57 ntambama
Oku kuyinyani eshushu, izibini ziza kufumana le ndoda imangalisayo ukunyusa ubomi babo bobulili. Ndifuna ngokuyimfuneko le ngcaciso kwaye ndikhangele ukusebenzisa umntu oya kulungela inkqubo yam. Le ngcaciso ifike ngexesha, iyakwazi ukuthenga i-cialis ngaphandle kwemithi.
Burrows ye-Landen09 / 19 / 2018 kwi-5: 10 ntambama
Ndiya kuqinisekiswa ukuba ndincoma aba bahlobo abasebenza ngokwesondo kwaye bafuna ukwandisa umnqweno wesini! Enkoso ngokwabelana.
Moz Chesk09 / 19 / 2018 kwi-4: 25 ntambama
Ezi zibonakala zifana nezilungiso ezincedo zokwandisa ubomi bakho bobulili, kwaye uyazi ukuba zeziphi iziyobisi ezizenzayo kuwe. Enkoso ngokwabelana!
Moch Sugih09 / 19 / 2018 kwi-12: 35 ntambama
Ndicinga ukuba izidakamizwa zesondo ezifana nalezi zinokubangela ukuxhomekeka, kwaye zisenze sizive sithembeke xa singasisebenzisi. Kodwa mhlawumbi kunokuba mnandi xa ungayisebenzisi le nto rhoqo, Esincinane kuninzi.
ULeonard Wesley09 / 19 / 2018 kwi-7: 25
Inene andinayo ingcamango malunga neziyobisi, ngokugqithiseleyo ukusetyenziswa kweziyobisi zesini. Kwaye banceda ngokwenene ngesondo?
Alfonso Franklin09 / 19 / 2018 kwi-7: 21
Wow, andingazi ukuba kukho izidakamizwa ezahlukeneyo zesini kubantu abesilisa nabesifazane ngokufanayo. Yeyiphi into enomdla!
Swiss09 / 19 / 2018 kwi-2: 35
Ndiyathemba abo bafuna le nkcazelo ukuba bafunde le nqaku. Ndicinga ukuba ezi ziza kubangela ukuba kuncedise kakhulu ngenxa yesondo kuba kuya kunceda ukukhulisa ubudlelwane obuhle phakathi kwezi zibini.
Feddy09 / 19 / 2018 kwi-2: 27
Oku kuyona nto ibaluleke kakhulu. Iingxaki ezinzima ziye zahlutha iintsapho kunye kwaye zifanelekile ukuba ezinye iziyobisi ezifanelekileyo zesondo kufuneka zihlanjululwe kwaye zithathwe ukuze zilungiswe. Ikoyikeka ukuba ezi ziyobisi zingakusiza ukukhulisa i-libido.
MAGL inhibitor kunye ne-FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750 I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-2018